MMASTROLOGY | Conscious of Electional & Horary MaHaBote: I haveadream !
ေဗဒင်ပညာ နိဒါန်း​အဂင်္​ဝိဇ္ဇာပညာ နိဒါန်း​မဟာဘုတ်
ေဆာင်း​ပါး​I haveadream !
ဒီြကားထဲ ထူးြခားတာ ဆိုရင်ေတာ့ အိမ်မက်ဘဲ ရှိတယ် ။ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကို အိပ်မက် မက်တယ် ။
ေန့စွဲက ။ ြပီးခဲ့တဲ့ မတ်လ (၂) ရက် ၂၀၁၂ အချိန်က ။ နံနက် ၈း ၃၆ ေန့ ။ ေသာြကာေန့
ေမးသူ အမည် ။ ြကာသပေတးစ + ေသာြကာ ေနာက်ပိတ်
ေမးေနကျ client တစ်ေယာက်ဆီက email ေရာက်လာတယ်ေလ။ စာထဲမှာ ေရးထားတာက
" ဆရာေတးရှင့် ...
အေရးြကီးတဲ့ ေမးခွန်းေလးမို့ အချိန်ရရင် ဦးစားေပး ေြဖြကားေပးေစလိုပါသည်။ ကျမအလုပ်တခု ေလျာက်ထားပါသည်။ အလုပ်က Oslo University - Research Fellowship position in Political Scinence Department မှာပါ။ ေလျာက်တဲ့ေန့ က ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၁၂ ရက် - အဲဒီေန့ မတိုင်ခင် ၆ရက်ေန့တုန်းက အဲဒီဌာနရဲ့ အြကီးဆံုး နဲ့ သွားေတွ့တယ်။ နာမည်က ေတာ့ Prof x x x ပါ။ ကွျန်မ လုပ်ေနကျ အလုပ်မျိုးမို့ လုပ်နိုင်တယ် .... လုပ်ချင်တယ် ဆုိပါေတာ့ ဆရာေရ..။ သူတို့က ဆံုးြဖတ်မယ် ဆိုရင် သံုးလေလာက် ြကာမှာ ။ ေမလ ေလာက်မှ သိရမယ် ဆိုပါေတာ့။ " ကျမ ရဲ့ ေမးခွန်းက အဲဒီ အလုပ်ရမလား ဆိုတာပါဘဲ .. "
Client က သူ့ရဲ့ ြဖစ်ေြကာင်းေလးေတွ နဲ့ ေမးချင်တဲ့ ေမးခွန်းကို ေဖာ်ြပထားတယ်ေလ။ ေမးခွန်းကို ေရးချိန်မှာ စိမ်းြပာေရာင် ဘေလာက်စ် နဲ့ လိေမ္မာ်ေရာင် စွယ်တာ ၀တ်ထားြပီး ေဘာင်းဘီကေတာ့ အနက်ေရာင်ပါတဲ့။ တွက်ချက်ရာမှာ အဆင်ေြပေအာင် နိမိတ်ယူလို့ရေအာင် ေရးေပးထားတယ် ဆုိပါေတာ့။ Client ရဲ့ စာအသွားအလာကေတာ့ ပံုမှန်ဆုိေပမဲ့ email ေနာက်ဆံုး အပိုဒ်မှာ ဒါေလးတစ်ခုကို ထည့်ေရးထားတယ် ..။ ဖတ်ြကည့်လိုက်ေတာ့ ..
" ဒီြကားထဲ ထူးြခားတာ ဆိုရင်ေတာ့ အိမ်မက်ဘဲ ရှိတယ် ။ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကို အိပ်မက် မက်တယ် ။ ဒါလည်း နိမိတ်လို့ေတာ့ မေြပာနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ ။သူ့အေြကာင်းက ေန့စဥ်ဖတ်ေနတာဆိုေတာ့ေလ။ တြခားေတာ့ ထူးြခားတာ ဘာမှ မရှိပါ။" ဘူးတဲ့..။
Client က နိမိတ်လို့ မယူဆဘူးဆုိေတာ့ ကိုယ်လည်း အသာေခါက်ထားလိုက်တာေပါ့။ ေမးခွန်းကို ေြဖဖို့ စဥ်းစားလိုက်တာ အေြဖက ၄ မျိုး ထွက်လာတယ်။ မထွက်ခံနုိင်ရိုးလား . . နံေတာ်စဥ်နဲ့ ညှိ၊ အဂင်္၀ိဇ္ဖာတိုင်နဲ ့ညှိ ၊ သက်ေရာက်တုိင်နဲ့ ညှိ ၊ မဟာဘုတ် နဲ့ ညှိ .. ၄ ခုေလာက် ညှိလိုက်တာ ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လည်ထွက်သွားတယ်ေလ.. ။ ေနာက်ဆံုးေတာ့ အိပ်မက် နိမိတ်ကို ြပန်သတိရလိုက်တယ်။ ဘာမှ ထပ်မစဥ်းစားေတာ့ဘူး . နိမိတ်ကိုပဲ ယူြပီး ေဟာလိုက်ေတ့ာမယ် ။ ဒါေပမဲ့လည်း စိတ်ထဲမှာေတာ့ မ၀ံ့မရဲ ြဖစ်ေနေသးတယ်.. ဥာဏ်ပူေဇာ်ေြကး ယူြပီး ... ြဖစ်ကတတ်ဆန်း ေဟာလိုက်သလို ြဖစ်သွားမှာစိုးလို့ေလ။
ေနာက်ဆံုးေတာ့ ဆံုးြဖတ်ချက် ဒုန်းဒုန်း ချလိုက်ြပီး စာြပန်လိုက်တယ် ..။ တစ်ြခား လိုအပ်တာေတွလည်း Counselling လုပ်ေပးလိုက်တယ်ေလ..
စိတ်ေအးချမ်းချမ်းေနပါ။ အဲဒီအလုပ် ရပါလိမ့်မယ်။ ေဒါ်စု အိပ်မက်ေြကာင့်ပါ။ သူကလည်း ေရွးေကာက်ပွဲမှာ ၀င်ြပိုင်မဲ့သူေလ.. နုိင်မယ်ဆုိရင်ေတာ့ ေဒါ်xx လည်း အဲဒီအလုပ် ရမှာပါ။
၃-၄ လ ေတာင် ေစာင့်ရမှာဆုိေတာ့ ြကားထဲမှာလည်း အလုပ် part time ြဖစ်ြဖစ် ၀င်လုပ်ေစချင်ပါတယ်။ လင်သားအေပါ် စိတ်မချတာကလည်း တစ်ပိုင်းေပါ့။ professional အလုပ်မဟုတ်ဘဲ supermarket ေတွမှာ Cashier လိုမျိုးေပါ့.. ခဏတာ လုပ်လို့ရတဲ့ ဟာေတွ လုပ်ြကည့်ပါ။ ၀င်ေငွတစ်ဖက်တစ်လမ်းက ရတဲ့အြပင် စိတ်မေလေတာ့ဘူးေပါ့။
အခုဟာက ဘယ်လိုြဖစ်ေနသလဲဆုိေတာ့ ေဒါ်xx က ေယာက်ျားနားမှာပဲ ြပုစုေနရတာ ဆုိေတာ့ ြကာလာေတာ့ စိတ်မချတာ၊ စိုးရိမ်တာေတွ များလာတာပါ။ ြဖစ်နုိင်ရင် ြမန်မာြပည်က တစ်ေယာက်ေယာက်ကို Domestic worker - အိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်၊ ြပုစုေစာင့်ေရှာင်တဲ့သူ အေနနဲ့ လှမ်းေခါ်လိုက်ေပါ့။ စ၇ိတ်လည်း သက်သာမှာပါ။ အဲဒါဆုိ ေဒါ်xx လည်း အြပင်မှာ အလုပ်ထွက်လုပ်ရတာ စိတ်ချသွားလိမ့်မယ်"
x x x ဒီလိုနဲ့ ဧြပီ ၁၈ ရက်ေန့မှာ client ဆီက စာြပန်လာတယ်ေလ ။ စာထဲမှာ ဒီေန့ပဲ ေလှျာက်ထားတဲ့ အလုပ်ဆီက အေြကာင်းြကားစာ ရတယ်ဆုိတဲ့ အေြကာင်း ။ အလုပ်ေလှျာက်တာ မရဘူးဆုိတဲ့ အေြကာင်း။ သူ အရမ်းေမှျာ်လင့် ထားတဲ့ အလုပ်ြဖစ်တာေြကာင့် ခံစားရတယ်ဆုိတဲ့ အေြကာင်း ေတွ ေရးထားြပီးေတာ့ ဘာေြကာင့် ခုလိုြဖစ်ရတာလဲ ဆုိြပီး Complaint လုပ်တယ်ေလ ။ ဘာေြကာင့် လွဲ ခဲ့ရသလဲ ဆုိတာကို ြပန်ြကည့်ေပးပါဆုိြပီး ထုေချလွှာေတာင်းထားပါေရာ . . ။ အင်း... နိုင်ငံြခားမှာ ေဗဒင်ေဟာရတာ မလွယ်ဘူးဗျ.. သိတယ်မဟုတ်လား ..။ ေဗဒင်ဆရာရဲ့ Ethic ေတွ လိုက်နာရတယ် ။ Private & Confidential ေတွကို ထုတ်မြပရဘူး။ မမှန်ရင် Complaint လာမယ်။ Explanation ေတာင်းမယ်။ တရားစွဲမယ်ဆုိရင်ေတာင် စွဲလို့ ရတယ်။ Insurance ထားချင်လို့ အာမခံ ကုမ္မဏီကို ေမးြကည့်တာေတာင် ေဗဒင်လုပ်ငန်းကို အာမခံေြကး မထားရဲြကဘူး . . ။ အဲဒါနဲ့ ပဲ စာြပန်ေရးရတာေပါ့ဗျာ.. Excuse ရှာြပီး ြပန်စာ ေရးလိုက်တယ်လို့ပဲ ေြပာရမယ်..
" နိမိတ်အရ ေကာက်ြပီး အေြဖထုတ်လိုက်တယ်လို့ ဆုိေပမဲ့ .. ြဖစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ပဲ အေြဖေပးရမှာပဲ ။ အြခားအချက်ေတွလည်း ရှိနုိင်ပါေသးတယ်.. အဓိက ကေတာ့ ေဒါ်x x ေယာကျ်ားအနားကေန မခွာချင်တဲ့ စိတ် (စိုးရိမ်လို့) က အရမ်းြကီးစိုးေနမယ်ဆုိရင် အဲဒီ ဆန္ဒေဇာကလည်း ဖံုးလွှမ်းသွားတာလည်း ြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ " ေဇာ သန်ရင် ဈာန် ြဖစ် " ဆိုတာေတာင် ရှိတယ်မဟုတ်လား..။" ဆုိြပီး..
ေနာက်ဆံုးတစ်ေြကာင်းကေတာ့ မေရးချင်ေပမဲ့လည်း client ေကျနပ်ေအာင် ေရးေပးလိုက်ေသးတယ် .. " ကျေနာ် ညံ့လုိ့လည်း ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ " လို့..
Client ကလည်း . ." စာြပန်တာ ေကျးဇူးတင်ေြကာင်း , အမျိုးသားကေတာ့ ဆရာေတး ရဲ့ ပညာကို ယံုြကည်တယ် ဆုိတဲ့အေြကာင်း ( Norway citizen ေနာ်) ။ အဲ.. ေဗဒင်ဆရာကိုလည်း ေဗဒင်ြပန်ေဟာပါသဗျ.. သူကုိယ်တုိင်ကလည်း ၆ ြကွင်းဖွား ြဖစ်တယ် ဆုိတဲ့အေြကာင်း .. ၊ အြကွား အ၀ါ ဟန်ေဆာင်မှုေတွ ေရှာင်သင့်တယ် ဆုိတဲ့အေြကာင်း ၊ အဲဒါေြကာင့် ဘာသာစကားနဲ့ ဆုိင်တဲ့ အလုပ်ကို Native speaker ေြပာတဲ့ အဆင့်မဟုတ်ဘဲ အဲဒီအဆင့်အတုိင်း ေြပာတတ်သေယာင် နဲ့ အလုပ်မေလှျာက်သင့်ေြကာင်း၊ ြပီးခဲ့တဲ့ အေခါက်ေတွတုန်းက consultaiton ေပးထားတ့ဲ ဟာေတွ အေြကာင်း အလ္လာဘ သလ္လာဘ ေတွေပါ့..
"အိပ်မက်နိမိတ် ြဖစ်တဲ့ " ေဒါ်စု" ဟာ အတိတ်ေကာင်း နိမိတ်ေကာင်း ေတွ ေပးေဆာင်နိုင်ခဲ့ပါသလား..."
ဆုိတာကိုေတာ့ ေဗဒင်ဆရာ နဲ့ ေဗဒင်ေမးသူ သာလှျင် အသိဆံုးပါပဲ ေလ..
ႏုုိင္ငံေရးသိပၺံဌာနက အျပဳိင္အဆုုိင္ အရမ္းမ်ားပါတယ္။ GPA 3.7 ေက်ာ္တာေတာင္ အဲလုုိအလုုပ္ရဘုုိ႕ မလြယ္ပါဘူး။ ေမြးကတည္းက ေျပာလာတဲ့လူနဲ႕ ယွဥ္ရတာ ပုုိခက္မွာေပါ့။ ေနာက္ျပီး ကုုိယ္က လ်ွမ္းလ်ွမ္းေတာက္ ေတာ္ေနရင္ေတာင္ သူတုုိ႕က သူတုုိ႕နဲ႕ တြဲလုုပ္ရတာ အဆင္ေျပမဲ့လူကုုိပဲ ေရြးပါတယ္။ (ဘက္မလုုိက္ဘူး၊ လူမ်ဴိးေရး မခြဲျခားဘူးဆုုိတာ အလကား ေျပာတာပါ။ ဘက္လုုိက္တာ လူမ်ဴိးေရး ခြဲျခားတာ သူတုုိ႕က ကြ်န္ေတာ္တုုိ႕ အေရွ႕တုုိင္းသားထက္ အဆတရာ သာပါတယ္။ ကုုိယ့္နာမည္ျမင္လုုိက္တာနဲ႕ ကုုိယ့္ေလ်ွာက္လႊာ အမွဳိက္ျခင္းထဲ ေရာက္ဘုုိ႕သာ ျပင္ထားပါ) ေနာက္တစ္ခုုက သူ႕ရဲ႕ အိပ္မက္ပါ။ အိပ္မက္ထဲမွာ နာမည္ႀကီးသူကုုိ မက္တာဟာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ စိတ္ပညာအရေတာ့ နာမည္ႀကီးသူကုုိ မက္တာဟာ သူ႕ကုုိ အားက်လုုိ႕ပါတဲ့။
သင့်​အား​ေကာင်း​ြမတ်​ေသာနက္ခတ် ၊​ေကာင်း​ြမတ်​ေသာ မဂင်္လာ သည် ြဖစ်​ေစသတည်း​အို . . . ဘား​မား​ဟု
You can reach me by calling the following number on O2 network. +44 (0)7522 722 423I am also using Viber free call application on IOS device. Daw Htwe - Chilli
Daw Htwe - Chilli powder
Better taste - Better food
Various kinds of "Daw Htwe" chilli powder, spices production & distribution. We warmly welcome wholesalers, retailers and exporters.
Try our quality products at City Mart, Yankin Centre Plaza, Orange Plaza , Ocean Plaze, Singapore, Malaysia, Japan & Australia for better taste!
No.1212/63, Thanlwin Street., Industrial Zone (2), South Dagon Township, Yangon, Myanmar
No.184-191, Ground Floor, Theingyi Zay . Block D, Latha Township., Yangon, Myanmar.
Tel : +95-1-240600 Ext 4511.
No.447, Thumana Road, 16/3 Block, Thingangyun Township., Yangon, Myanmar
Business Hour : 9:00am to 5:00pm စာညွှန်းများ
60 Seconds reading
iPredict - 1373
Thursday Born - Astrology Consultation
Thursday Born - Astrology Consultation အသက် ၁၇ ၊ ၂၅ ၊ ၃၃ ၊ ၄၁ ၊ ၄၉ ၊ ၅၇ ၊ ၆၅ အတွင်း ေရာက်ရှိေနသည့် ြကာသပေတး သားသမီးများ အတွက် - Astro...
သဒ္ဓါ၊​သီလ၊​သုတ၊​စာဂါ " ကဲ . .အခုအတိုင်း​. . အ​ေသခံလို့​ြဖစ်ပါ့​မလား​" " ငါတစ်ဦး​တည်း​အတွက်ဆိုရင်​ေတာ့​ြဖစ်ပ...
အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမှု အား ေလ့လာြခင်း iOS Developer တစ်ေယာက်ြဖစ်ဖို့ မဟာဘုတ်ရဲ့ ဘယ်ဋ္ဌာနေတွက ဘယ်လိုအကျိုးြပုသွားတယ်ဆုိတာကို ေလ့လာပါမယ်...
ေဗဒင် ဆိုင်ရာ အြကံြပုချက် ရယူလိုပါက အမည် ၊​ေမွး​သက္ကရာဇ်၊​ေမး​ချိန်တွင် ဝတ်ဆင်ထား​ေသာ အဝတ်အစား​အ​ေရာင်၊​ေမး​လို​ေသာ ...
Swing me for True Love
လက်စွပ်နဲ့ ေဗဒင် ေမးဖူးြကလား ဆံပင်ချည် (သို့) အပ်ချည်နဲ့ တစ်ေတာင့်ထွာ တုိင်းြပီး လက်စွပ်မှာ ချည်လိုက်ပါ။ ဖလား (သုိ့) ခွက်ထဲ ေရြဖည့်ြပီ...
Hein Tint Zaw
Etrade Astro View
Accountancy & MYOB Training
I offerafull accountancy service for small business and can help you with;
- Corporation Tax ( small co.)
- Training on Bookkeeping
Looking for bar code ?
If you are selling in store & online we provide unique
Annual Subscription - 50000 kyats
1 code - 5,000 Kyats Just Ask
MMASTROLOGY isaTrading Name of MYANMAR ASTROLOGY LTD company No 07348693, registered in England and Wales
1) Zay Yar Maung2) Tayy Aye YateUnauthorised alteration of articles are strongly prohibited.
Copyright © 2011 MMASTROLOGY | Conscious of Electional & Horary MaHaBote Design by Free Blogger Template Sponsored By New York City HD Photography Hd wallpapers, Eminem Wallpapers and mattscradle